China K uthotho reciprocating feeder amalahle mveliso kunye factory | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
Uhlobo lwe-K lokuphindaphinda kwamalahle usebenzisa i-crank yokudibanisa intonga yokurhuqa isitya esisezantsi seedigri ezi-5 ezantsi ukwenza intshukumo yokubuyisela kumqolo kwi-roller, ukuze ikhuphe ngokufanayo amalahle okanye ezinye izinto ezi-granular kunye neepowder ezingenanto kunye nepropathi encinci yokugaya kunye ne-viscosity encinci izixhobo zokondla izixhobo zokufumana.
Uhlobo lwe-K lokuphindaphinda kwamalahle usebenzisa i-crank yokudibanisa intonga yokurhuqa isitya esisezantsi seedigri ezi-5 ezantsi ukwenza intshukumo yokubuyisela kumgca wokuhambisa, ukuze ikhuphe ngokufanayo amalahle okanye ezinye izinto ezikhululekileyo kunye nezinto zomgubo kunye nepropathi encinci yokugaya kunye ne-viscosity encinci izixhobo zokondla izixhobo zokufumana. Uhlobo lwe-K lokuphindisela kwakhona ukutya kulungele ukuhambisa izinto ezininzi emigodini, emigodini, kumalungiselelo okulungisa amalahle, kwizikhululo zokudlulisa, kwiworkshop zokuphatha amalahle, kwizitishi zezinto ezininzi, njl.njl. izixhobo ngesisele okanye ngokuthe ngqo. Qaphela ukondliwa okufanayo kwentsimbi, amalahle esanti, iinkozo kunye nezinye izinto ezikhulu
Esi sixhobo sinokondla amalahle ngokulinganayo ngokusebenzisa i-bunker yamalahle ukuhambisa okanye ezinye izixhobo zokuhlola, ezifanelekileyo kumzi-mveliso wamalungiselelo am
1. Ulwakhiwo: Isondli samalahle senziwe ngefaneli, isinciphisi, imoto eqhelekileyo, iqonga lokuhambisa, indlela yokuhambisa, ipleyiti esezantsi (ipleyiti yokondla amalahle), umzimba wokondla amalahle, iroli kunye nesango.
2. Umgaqo: ngokusebenzisa isinciphisi kunye ne-crank yokudibanisa indlela yentonga, i-motor iqhuba ipleyiti esezantsi ukwenza umlinganiso wokubuyisela umlinganiso kwisondo, ukuze ikhuphe ngokufanayo izinto zokuhambisa okanye ezinye izixhobo zokuhlola.
Zimbini iindidi zesakhelo sokondla amalahle: ngesango elilawulayo nangaphandle kwesango elilawulayo.
Imveliso enesango elilawulayo inokulawulwa ligeyithi, kwaye imveliso edweliswe kwitheyibhile engentla yimveliso xa ihlengahlengiswa kwindawo ephezulu (elingana naleyo ngaphandle kokulawulwa kwesango).
Ukufakwa kunye nokusetyenziswa kohlobo lwe-K lokuphindisela kumxhasi wamalahle (feeder)
1. Ukuphindisela kwakhona kumxhasi wamalahle kulungiswe phantsi kokuvulwa komgqomo wokugcina. Ngaphambi kofakelo, kuyimfuneko ukumisela indawo ethe tyaba, qhoboshela isakhelo kunye nokuvula imigqomo ngeebholithi, emva koko ubeke iqonga lokuhambisa kwindawo efanelekileyo, weld isakhelo se-H ngesakhelo kunye neqonga lokuhambisa ngokuqinileyo, ulungelelanise kwaye ufake i-reducer kunye ne-motor, zilungelelanise ngokufanelekileyo, kwaye zibambe ngeebholithi.
2. Emva kokufakelwa kokuphindisela kumxhasi wamalahle, akukho mthwalo wokuvavanywa komthwalo ofunekayo. Ngexesha lokusebenza, khangela ukuba onke amalungu asebenza ngesiqhelo, kwaye amaqondo obushushu aphezulu ukunyuka kokuqengqeleka akuyi kuba ngaphezulu kwe-60 ℃.
3. Xa uhlengahlengisa imveliso ngokweemfuno zokothula, khupha ishaf shaft kwindawo ye crank, khulula i-nut, ujikeleze indawo "1,2,3,4 ″ yeqokobhe le crank ukukhetha indawo emiselweyo, faka pin shaft, qhagamshela crank kunye crank iqokobhe, qinisa isikhonkwane shaft kunye nut, uze uqale injini emva kohlengahlengiso.
Ukulungiswa kwemihla ngemihla kunye nokugcinwa kohlobo lwe-K lokuphindisela kumxhasi wamalahle (ukuphindisela feeder):
1. Phambi kokusebenza kwe feeder, kufanele ukuba kubekho amalahle ekrwada aneleyo kwigumbi elingaphantsi ukuze kuthintelwe ifuthe ngqo kumgangatho (ipleyiti yokutyisa amalahle) xa kulayishwa amalahle kwindawo yokugcina izinto.
2. Emva komsebenzi oqhubekayo rhoqo ngenyanga, jonga ukuba amalungu omatshini akhululekile na kunye nezinye izinto ezingaqhelekanga. Ukuba kukho izinto ezingaqhelekanga, zilungise kwangoko.
3. Isipleyiti esisezantsi sokuphindisela ukutya kumalahle ngokudibana ngqo namalahle kufuneka kulungiswe okanye kutshintshwe ukuba ubukhulu bawo bungaphezulu kwesiqingatha sobukhulu bokuqala.
Ukuba iinxalenye eziphindayo azisebenzi ngokwesiqhelo kwiinyanga ezintandathu, kufuneka zitshintshwe kwangoko.
Ukugcinwa kweendawo eziphambili zokubuyisela ukutya kumalahle:
a. Ukunciphisa: jonga rhoqo kwiinyanga ezintandathu, kwaye ucoce i-rolling bearing kunye nebhokisi okanye utshintshe ioyile yokuthambisa.
b. Imoto: ngokweemfuno zolondolozo lwemoto.
Egqithileyo Uthotho lwe-HGM lusebenze ukungcangcazela kumalahle
Okulandelayo: ZG feeder eshukumayo